Izipho nge-zodiac: Izimpawu zamanzi
Ukukhetha isipho kubantu benkampani yamanzi - I-Cancers, Scorpions kanye nama-Pisces, kubalulekile ukucabangela ukuthi abameleli balezi zimpawu bazwela kakhulu futhi basengozini. Ngakho-ke, izipho ezinamahloni amnyama zingabangela imizwelo emibi. Lezi zibonakaliso zithandana, zithandana nemicabango, imizwelo kanye nobuciko. Kodwa ngesikhathi esifanayo bafihlakele, abavilapha kancane, ngezinye izikhathi bafumana ukudabuka nokulangazelela, noma bangawela ekufuthekeni okungenakuqedwa.
Yini ongayinika ama-Pisces?
I-pisces iyisignali engaqondakaliyo nenganekwane. Ngakho-ke, abantu balesi sibonakaliso bathanda konke okuhlobene nemigqa yemfihlakalo: amakhadi, ama-card, izinsimbi "umculo womoya", amabhandlela anamakha kanye namathiti, ibhola lomlingo.
Ama-pisces akuzona abathandi bembali enkulu kunazo zonke, kodwa ngeke banqabe izimbali ezinesizotha nezithobekile. Njengesipho kufanele ukhethe ama-violets, ukhohlwa-mina-nots, ama-peonies noma ama-carnations.
Abamele izakhamuzi zaseRobb eziqhakazile nabaphuphayo. Ngakho-ke, ubapha izipho ezisiza ukuphumuza futhi uphuphe ngokuhle: imithwalo, izingubo zokulala, izesekeli zebhedi, izitofu ezinamathebhu kanye nezihlalo zamasheya, kanye nezitsha zokuthenga indawo yokubhuka noma i-massage.
Phakathi kwezindlela zezinhlanzi, zizohlala zithanda izinto zakudala: ziqala kusuka ekuhlobheni, lapho igolide igolide negugu, njenge-shamrock, isafire, i-amber, i-opal nokuphela komculo. Ngakho-ke, ama-Pisces azojabula ukuthola amathikithi njengesipho sekhonsathi ye symphony orchestra noma i-ballet e-Bolshoi Theatre.
Ama-pisces awazisa kakhulu izipho ezingezona izinto, lapho umuntu ebeka khona umphefumulo wakhe. Uma ithalenta yakho ivumela, bhala izinkondlo bese ubhala ingoma ngokuhlonishwa kwabo. Amaphutha ahloniphekile futhi ahloniphekile ngeke abe nomkhawulo! Uma izinkondlo akuzona iqembu le-vyssylnaya kunazo zonke, khona-ke ungakwazi nje ukuzenza i-collage enhle yezithombe.
Njengoba isakhi sePisces singamanzi, abamele lesi sibonakaliso bathanda konke okuhlobene nomvelo wamanzi. Ukuya epaki yamanzi noma i-dolphinarium ngeke kubashiye abangenandaba. Ama-aquariums amancane, izihloko ezenziwe ngamagobolondo, imikhiqizo yeshawa, e-generalall ehlangene namanzi, ixhunyiwe kusuka ezintweni.
Ama-pisces awunandaba ukuthi uchitha imali engakanani ngesipho sabo. Kubaluleke kakhulu ukuba bahlanganyele futhi banakekele. Ngakho-ke, ngisho nohlaka lwama-banal luzobenza bajabule, kodwa esimweni sokuthi ubonisa umcabango: uyihlobise nge-bead noma ubuhlalu noma ufake ihlekisayo noma nje isithombe esihle.
Ama-pisces ayenomzwelo kakhulu futhi othandana. Ngakho-ke, kusihlwa ngamakhandlela nomculo omnene uyobajabulisa futhi bakhunjulwe isikhathi eside.
Yini ongayinika Cancer?
I-Cancer mhlawumbe izwela kakhulu kuzo zonke izibonakaliso ze-zodiac. Ngakho-ke, into ebaluleke kakhulu ukuthi bayakwazisa ngezipho - ukuthi zanikezwa ngobuqotho nangenhliziyo ehlanzekile.
Amakhansela afana nezimbali ezicwengileko ezinesibindi: irises, i-white, noma i-pink rose, i-daffodils, i-snowdrops engenakuzivikela. Kodwa izimbali ezikhanyayo, ezinkulu nezinomsoco, ezifana ne-chrysanthemums noma i-gladioli azifanelanga.
Abantu abazalwa ngesibonakaliso seCanscer, bawazisa kakhulu induduzo yekhaya nomphefumulo. Ngakho-ke, bathanda isipho sezinto zasendlini kanye nezitsha zasekhishini: isethi yetiye, iqoqo lezimbiza namaphini, amathayi asekhishini kanye nabathengisi, incwadi enezokupheka noma ama-slippers.
Njengomthetho, ekhaya kukhona ama-albhamu amaningi nezithombe. Bathanda ukuhlela ne-razrashivat ezungeze isithombe sendlu ngesithombe sabathandekayo babo, ngakho-ke isithombe esilandelayo sesithombe sangempela ngeke sibe sesifanele.
I-Crayfish ithanda ama-trinkets ahlukahlukene-azinhliziyo: ama-statuettes, izintelezi, ama-brooches amancane noma amasongo, amabhasi, amakhandlela, kanye nama-mugs namacwecwe, anezithombe zabo noma abathandekayo babo.
Abantu be-Rakpo-baby isignes futhi ngezinye izikhathi ngisho nabancane, futhi kungakhathaliseki ubudala bethanda ukuthenga amathoyizi athambile. Ngakho ufika ekugcineni, uma ubapha ibhere elikhulu noma i-hare, abangayifaka eseceleni noma badlale nabo kanye nezingane zabo noma abazukulu.
I-Cancer ayithokozi nje kuphela lokho abanikezwe ngakho, kodwa futhi nokuthi inikezwe kanjani. Ngakho-ke, thatha inkinga ukulungisa inkulumo enesizotha, kangcono evesini, noma ukuthi ungayishaya kanjani konke, kunokuba usheshe ukunikeza isipho, uxoxe ngaphansi kwe-nosesdzhurnoe "ukuhalalisela."
Ngokwezinhlobonhlobo, uRaki unikela ngokukhethekile ngesiliva, futhi amatshe abo ayigugu yi-emerald, amaparele, i-agate ne-moonstone.
I-Scorpio ibhekwa ngokufanele njengesignali yesigceme nesigqila. Abamele lawa makhamera ngokuqondile bakhipha amandla ocansi ocansini. Ngakho uma ubuhlobo obuseduze ne-Scorpio, ungahamba ngokuphepha esitolo socansi ngenqola entsha ye-toyerotic noma esitolo sangaphansi kwezingubo zangasese bese ukhetha isembatho esivela kunazo zonke lapho.
Ama-Scorpios adonsa okubaluleke kakhulu. Ngakho-ke, uma unquma ukumnikeza incwadi, kufanele kube indaba yombumbulu noma into emnandi. Lokhu kusebenza nakumafilimu e-Scorpio: izindaba ze-spypial, ama-movie anemininingwane ecacile kanye ne-denouement engalindelekile kakhulu ethandwa abamele lesi sibonakaliso. Njengesipho, izesekeli zemilingo nazo zifanelekile: Amakhadi we-Tarot, iqoqo lezinkohliso kanye nezinto zokukhuluma ngenhlanhla.
Abantu abazalwa benesibonakaliso se-Scorpio, banengqondo ebuza futhi eguquguqukayo, bayathanda ukuxazulula izinkinga ezihlukahlukene. Ngakho-ke, bathanda konke okwenza ubuchopho babo basebenze: amapuzzles, puzzle ezingavamile, omagazini abanamapuzzles e-crossword - konke lokhu kuzothatha isikhathi eside.
Ama-scorpios ayathanda kakhulu lapho anikezwa izimbali. Iningi lazo zonke ama-Scorpios azohambisana ne-roses ephuzi, iminduze, ama-chrysanthemums. Futhi uma uthatha isinqumo sokubanika isitshalo ebhodweni, khona-ke makabe yi-cactus - into engeyona into ehlabayo, kodwa i-cacti nama-Scorpios ahleleke kahle kakhulu, kanti zonke izitshalo abangakwazi ukuzenza ngokushesha.
Kusukela ohlelweni lombala, i-Scorpions ikhetha imibala emnyama, imibala eqondile: omnyama, i-burgundy, eluhlaza okwesibhakabhaka, i-grey, kunokugqamile okukhulu. Okuhlukile umbala obomvu nawo wonke ama-shades. Ngakho uma unikeza izesekeli ze-Scorpio zivumele ukuba zibe imibala ebomvu: izinhlamvu, amaglavu, izikhwama. Futhi uma izingubo, bese ukhetha umbala omnyama, kungase kube izingubo, ugqoke noma ama-suits. Into esemqoka ukuthi zonke lezi zinto ziyiqiniso.
Ama-Scorpios anomqondo onobucayi kakhulu wephunga, angabizwa ngokuthi i-aroma-maniacs! Abantu abanjengalesi sibonakaliso banjengokuzama ukuhlola imimoya ehlukene, ngezikhathi ezehlukene bayathanda ukunambitheka okuhlukile. Akukhona nje ukuthi amanzi angasese kuphela noma amafutha kufanele abe yikhwalithi, mhlawumbe ebiza kakhulu, ngaphandle kwalokho ubungozi bokudumaza i-Scorpio.
Abamele isibonakaliso se-Scorpio uthando lokumangala nokuziqhenya. Ngakho-ke, ungabaniki isipho esivela kuhambahamba "ebunzini." Qinisekisa ukumboza isipho ephaketheni elihle, bese i-Scorpio izobheka phambili ithuba lokuyihambisa futhi ubone ukuthi yini ngaphakathi ngaphakathi. Ngcono nakakhulu, uma ungamniki isipho ngokwayo, kodwa ikhadi, okuyinto ezoba yindawo lapho okulandelayo kuyinkomba khona, lapho ufuna khona umklomelo. I-Scorpio izobona injabulo ye-puppy, ihambela umzila obonisiwe futhi ithole wonke amathiphu amasha ayisondeza eduze nesipho esithandekayo.
Uma unquma ukunikela ngezingubo zokugqoka, kungcono ukukhetha ukuhluka okuvamile. Igolide nedayimani zihlala zifanelekile. Uma ukhetha amatshe e-scorpion, bheka i-topazi, i-carnelian ne-quartz ne-aquamarine.
I-Horoscope ngo-December 2017 - owesifazane uDeva - ovela eTamara Globa no-Angela Pearl
Yini elindele uGemini ngo-2014
I-Horoscope yama-Libra amadoda ngo-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa
I-Horoscope ye-Capricorn-abesifazane ngo-December 2016
I-Lioness ne-Gemini: Ukuhambisana
Yiziphi izimpawu ezithembekile kakhulu zezinkanyezi phakathi kwabantu?
Isaladi ye-mushroom nge anyanisi
Ukubhaliswa kwekhaya kwezinwele ze-biolamination
Senza isisu ngesidumbu sikaGourmet's Day
Imithetho engu-10 yokuphila okusebenzayo okunempilo
Izivivinyo eziyinkimbinkimbi ku Tai Chi
Amafutha abalulekile anezakhiwo ze-aphrodisiac
Indlela yokuwina indoda eshadile
Izinkondlo mayelana nothando nokuthembeka zihle kakhulu izinyembezi - kumuntu ode futhi nentombazane ethandekayo. Izinkondlo mayelana nothando lwezigaba zakudala kanye nezimbongi ezidumile (ezincane nezinde)
Ukubhukuda okuhambisanayo kusiza ukulahlekelwa isisindo
Amaski okubhekene noju ekhaya
Amasks aseKalina ekhaya
Izici zamadoda ase-Arab
Ubani ongasebenzela owesifazane emazweni aseYurophu?